Mibilaogy Ho An’ny Antony Ara-Tsosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2018 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2008)
Tsy afaka miolonolona samirery isika. Mifamatotra amin'ny kofehy maro tsy hita maso ny fiainantsika, ary eo ambonin'io lamban'ny fitiavanàmana io, mandeha tahaka ny eo amin'ny làlan'ny antony sy ny fiantraikany.” (Herman Melville, mpanoratra amerikana)
Efa ato anatintsika hatramin'ny nahaterahana ny finiavana hanampy ny hafa, na dia tsy ataontsika laharampahamenana aza izany indraindray. Tsy maintsy ilaina sy mahomby ireo tetikasa iombonana mba hahafahana mitondra fiovana maharitra. Ao anatin'ny ankamaroan'ny tranga, rehefa misy loza mitatao, toy ny loza voajanahay, mahita ny herimpo ilaina mba andraisana anjara amin'ny hetsika iombonana ary hanampiana an'ireo tsy manana fiarovana isika. Fa maninona no miandry ny fisian'ny tranga toy izany foana alohan'ny hamadihana an'ireo fikasana tsara ho hetsika mivaingana, ao anatin'ny fiainana andavanandro ?
Mieritrereta olana iray izay manimba ny fiarahamonintsika. Inona no ilaina hamahàna azy? Inona ny loharanonkarena ilaina ary ahoana ny fomba afaka ahazoana azy ?
Taona vitsy monja lasa izay, tsy maintsy niandry an'ireo haino aman-jery mahazatra niseho ho tompondakan'ny fandraisana an-tanana ara-tsosialy mba hanampiana ny hafa isika. Androany, omen'ireo ny haino aman-jery vaovao natao ho an'ny olontsota ny fahafahana mihetsika ho an'ireo olontsotra.
Raha jerena akaiky ireo tetikasa an'olontsotra an'ny Rising Voices (anglisy), hanaiky ianareo aloha fa traikefa mahafinaritra ilay izy : mahita ny fiantomboan'ny bilaogy vaovao, mahita azy maka endrika ary miova ho hery tsy ampoizina. Tahaka ny miezaka manala an'ireo eritreritra voageja anaty tranonà zanadandy sy manafaka azy ireo aminà fanelingelenana iray, amin'ny fanalàna ny sakana sy fahasorenana, mba hanimpazana azy ireo tahaka ny balafomanga nofonosina fanahy maniantona sy herimpanahy miavaka. Asehondry zareo antsika ihany koa ny ohatra amin'ny firotsahany manokana anaty tolona ara-tsosialy.
Bilaogera valo ambin'ny folo taona mianatra eny amin'ny Sekolin'ny fanaovana gazety ao Mahajanga ao Madagascar i Diana Chamia, ary nanaraka fiofanana momba ny “haino aman-jerin'olontsotra” izay natao tao amin'ny FOKO Blog Club (anglisy). Niavaka ho mahay lavitra noho ny maha-mpanoratra mahay azy fotsiny i Diana, nahavita zavatra tena niavaka izy.
“Ampio ahy anampy azy ireo” (amin'ny anglisy)
Namaly ny antsony ny fiarahamonin'ny bilaogeran'ny FOKO tamin'ny fampanantenana ny hanaovana antso avo manerantany ho an'ny firaisankina mba hanampiana an'ilay zaza sy ny fianakaviany.
$500,00 (eo amin'ny €335,00) ny vola voalohany nilaina mba hitondrana an'ilay zaza ao Antananarivo, renivohitra, mba hahafahana manao tombana ara-pitsaboana tsaratsara kokoa, ary ny vondrom-piarahamonin'ireo mpampiasa aterineton'ny FOKO Madagascar no niandraikitra ny fanangonambola teo amin'ny Aterineto. Vetivety taorian'izany, fianakaviana malagasy mahafinaritra, mipetraka any Kanada, no niantso an'i Diana ary niandraikitra an'ireo sarany rehetra.
Avy eo, noraisin'ny FOKO ho andraikitra ny fandrindrana an'ireo olona voakasika tamin'izany (mpandidy, mpamatsy vola, reny miahiahy te-hanome akanjo sy sakafo) ary nanomboka namoaka vaovao isanandro momba ny tantaran'i Kamba ny FOKO. Nitondra ny fanohanany an'ilay fianakaviana i Diana nandritra ny dia ho any amin'ny renivohitra hiatrika ilay fandidiana, ary nanolotena ny hijanona miaraka amin'ilay zaza mandritra ny iray volana nipetrahany tao amin'ny hopitaly.
Nanoratra i Diana fa salama tsara i Kamba izao (anglisy). Jerijereo matetika ny adresin’ito bilaogy ito mba hamakiana ireo vaovao farany.
Ohatra mahafinaritra ity tantara ity momba ny tsy fihambahambàn'ny olona iray afaka mitondra fanovana matotra eo amin'ny fiarahamonina.
Tahaka izay ihany, mahita hetsika mitovy amin'izay isika ao amin'ny tetikasa tahaky ny Hiper-Barrio izay:
“Ao San Javier La Loma, havoana ipetrahan'ny vondrom-piarahamoninà mpiasa eo akaikin'i Medellin, onenan'ilay olomalaza ao an-toerana, fantatra amin'ny hoe Filthy Suso, izay , hatreto, iray amin'ireo mampanontany tena. Noho ny hetsika fifandraisana an'ny Hiper Barrio (espaniola), tetikasanà fanaovangazetin'olontsotra, afaka andraisana anjara ao an'ny Rising Voices (anglisy), Catalina Restrepo Martínez (espaniola), ary Gabriel Jaime Venegas (espaniola), ny fikambanan'ireo mpanao gazetin'olontsotra namoaka horonantsary sy lahatsoratra (espaniola) momba an'i Filthy Suso, ilay mpanangona fako azo averina indray ho trandrahana ao La Loma. Mila tenenina fa lasa teo amin'ny pejy voalohan‘ny gazety Conexion mivoaka isan-kerinandro ao an-toerana ny lahatsoratrin'ny Hiper Barrio momba an'i Suso,
Ireo ohatra roa ireo no porofon'ny fahatsapana tsy misy toa azy sy ambaratonganà fahatsiarovantena sosialy vaovao ao amin'ny tanora tafiditra amin'ireo haino aman-jerin'olontsotra ifandrimpobonana. Vita izany rehetra izany noho ny firesahana sy fifanakalozana teo amin'ny aterineto, ary hatramin'ny finiavana lalina ny hanova zavatra, izay ambonin'ny fitiavantena na tombontsoa manokana.
(Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Rehefa vita ny fandidiana ka nitsahatra i Diana sy ny FOKO, dia ny ekipa niaraka tamin'i Avylavitra sy ireo namana vitsivitsy tao Italia indray no nandray an-tànana ny fikarakaràna an'i Kamba sy ny fianakaviany. Nampian'ireo Malagsy am-pielezana tany amin'ny firenena hafa (Frantsa, Etazonia, sns…) Nanaramaso ny tohin'ny fahasalamany hatramin'ny fara-fofonainy, ary nandray an-tànana ny fampianarana ireo iray tampo taminy sisa. Tsy nijanona teo ny asa, fa nanangana ny Association TETEZANA MADA i Avylavitra, Mino, Andry, Mavo mba hanohizana ny asa sosialy efa natomboka tamin'ny 2008 – feno 10 taona amin'ity 2018 nandikàna ny lahatsoratra ity – ke teny antenantenany teny dia nisy ny fandraisana an-tànana indray ny fitsaboana ankizy hafa, toa an'i JOSEPHINE izay notsaboina aretina homamiadan'ny maso tao amin'ny hopitaly HJRA, rehefa avy nifampiresaka tamin'i Franco Randria, tany Fianarantsoa ny ATM. Nivoatra nankany amin'ny fampianarana ny asan'ny ATM avy eo, ka hatramin'izao. Efa tsy ao anatin'ny fikambanana intsony i Avylavitra manomboka amin'ity taona 2018 ity, fa mitohy amin'ny zotra hafa. )
Lahatsoratra mifandraika amin'ity:
* Antso avo ho fanampiana an‘i Kamba | Malagasy eto Italia
* Mitomany an’i Kamba kely ny foko | gazety_adaladala
* Faraveloma ho an‘i Kamba kely | Malagasy eto Italia